WARBIXIN: Shaxaha Macquulka Ah Ee Ay Xili Ciyaareedka Cusub Ku Soo Shirtagi Doonaan Lixda Tababare Ee Kooxaha Premier League Ugu Waa Wayn Iyo Kooxaha Haddaba Cabsida Laga Qabi Karo. - GOOL24.NET
WARBIXIN: Shaxaha Macquulka Ah Ee Ay Xili Ciyaareedka Cusub Ku Soo Shirtagi Doonaan Lixda Tababare Ee Kooxaha Premier League Ugu Waa Wayn Iyo Kooxaha Haddaba Cabsida Laga Qabi Karo.
August 12, 2018 Mahamoud Batalaale
Suuqii xagaaga ee Premier league ayaa soo xidhmay waxaana caawa kulankii ugu horeeyay ee furitaanka xili ciyaareedka cusub ee Premier league lagu daah furay kulankii Manchester United ay guusha ka gaadhay kooxda Leicester City waxaana dhawr bilood kadib uu danbayn soo laabtay xamaasadii horyaalka Ingiriiska ee Premier league.
Inkasta oo kulamada furitaanka iyo waliba kulamada soo socda ayna tababarayaasha Premier league wada heli doonin shaxahooda ugu xoogan kadib ka qayb galkii koobka aduunka ee xidigaha muhiimka ah, haddana waxaa jira qorshayaal ay diyaarsadeen lixda tababare ee Premier league sida tooska ah ugu tartami doona.
Mar haddii uu suuqii Premier league soo xidhmay waxay tababarayasha horyaalka Ingiriiska gaar ahaan kuwa kooxaha waa wayni ku qasban yihiin in ay diirada saaraan ciyaartoyda ay haystaan, iyada oo shabakada Gool24 ay halkan idiinku soo gudbinayso shaxaha macquulka ah ee lixda tababare ee Premier league ugu tunka wayni ay ku ciyaari karaan.
Haddaba lixda kooxood ee Premier league ugu waa wayn ee koobka Premier league ku tartami doona oo kala ah Manchester City oo koobka difaacanaysa, Manchester United oo kaalinta labaad xili ciyaareedkii hore ku soo dhamaysatay, Liverpool oo kaalinta saddexaad soo gashay isla markaana finalkii Champions League soo gaadhay, Tottenham oo kaalinta afraad ku dhamaysatay iyo kooxaha Chelsea iyo Arsenal oo xili ciyaareedkii hore seegay afarta sare.
Haddaba halkan kaga bogo shaxaha macquulka ah ee ay xili ciyaareedka cusub ku shaqayn doonaan lixda tababare ee kooxaha waa wayn ee Premier league:
Manchester City– Difaacashada Premier League
Manchester City ayaa markale xili ciyaareedka cusub ee Premier league bilaaban doonta iyada oo ka mid ah kooxaha ugu cad cad ee koobkan ku guulaysan kara iyada oo Guardiola uu wali haysto mid ka mid ah kooxaha Yurub ugu fiican.
Inkasta oo Manchester City ay xagaagan ka gaabisay kharashkii badnaa ee ay suuqa ku bixin jirtay waxay kooxdeeda ku soo xoojisay Riyad Mahrez kaas oo hal abuurkii Etihad Stadium wax badan ku soo kordhin kara, waxayna ilaa hadda saadaashu muujinaysaa in Man City ay wali tahay kooxda koobka markale looga cabsan karo haddii ay sii joogteeyaan qaab ciyaareedkii xili ciyaareedkii hore.
Shaxda Macquulka Ah Ee Uu Guardiola Ku Ciyaari Doono Xili Ciyaareedka Cusub:
Manchester United- U Tartamida Koobka Premier league
Manchester United oo xili ciyaareedkii hore kaalinta labaad kaga dhamaysatay Premier league ayaa markale ka mid ah kooxaha sida xoogan ugu tartami kara koobkan laakiin walaaca ugu wayn ee Old Trafford ka jira ayaa ah in Mourinho uu niyada ka sii xumeeyay ciyaartoyda kooxdiisa kadib markii uu si qaawan uga hadlay xaaladii suuqa kala iibsiga ee kooxdiisa uu fashilka wayni ka soo gaadhay.
Inkasta oo uu Jose Mourinho lacag ka badan 400 milyan gini uu suuqa soo galiyay labadii xili ciyaareed ee uu Man United soo maamulayay waxay haddana xagaagan maamulka kooxdiisa isku khilaafeen saxiixyadii uu doonayay in uu kula tartamo kooxaha waa wayn.
Manchester United ayaa haysta ciyaartoy aad u fiican balse qaar badan oo ka mid ah waxaa naafo ka dhigay hanaanka ciyaareed ee Jose Mourinho waxaana ciyaartoydan ugu horeeya Anthony Martial, Paul Pogba iyo Marcus Rashford iyada oo la sugayo sida Alexis Sanchez uu ula falgali doono qorsha Mourinho xili ciyaareedkiisa buuxa ee ugu horeeya Man United.
Manchester United ayaa helin xoojintii ay doonaysay marka laga reebo Fred kaas oo ah saxiixa kaliya ee shaxda Mourinho ka soo muuqan kara ee ay Man United samaysay laakiin Manchester United oo guul ku furatay horyaalka Premier League ayaa haddaba eedayn badan kula kulantay hanaankii ay Leicester City ula ciyaartay taas oo wali muujinaysa in Red Devils ay ku adkaan karto in ay koobka ku guulaysato.
Shaxda Macquulka Ah Ee Uu Mourinho Ku Ciyaari Doono Xili Ciyaareedka Cusub:
Liverpool-U Tartamida Koobka Premier league
Liverpool waxay xili ciyaareedkii hore kaalinta afraad kaga dhamaysatay Premier league laakiin horumarkii ay ku gaadhay finalkii Champions League iyo waliba saxiixyada uu Jurgen Klopp sameeyay suuqii xagaagan waxay kooxda Reds ka dhigtay mid ilaa hadda la saadaalinayo in ay tahay kooxda Man City sida toos ah ula tartami karta.
Liverpool ayaa ugu danbayn xalisay dhibaatadii kooxdeeda ugu waynayd ee dhinaca goolhayaha kadib markii ay Alisson la soo saxiixatay laakiin waxaa xili ciyaareedak cusub muhiimad wayn u yeelan doona Naby Keita, Fabinho iyo waliba Shaqiri oo Klopp siin doona doorashooyin badan.
Liverpool ayaa hadda haysata koox xoogan oo sii wadi karta horumarkii xili ciyaareedkii hore waxaana si isku mid ah loogu saadaalinayaa in Manchester City ay la awood noqotay taas oo la ogaan doono marka uu xili ciyaareedku si fiican u bilawdo.
Shaxda Macquulka Ah Ee Uu Klopp Ku Ciyaari Doono Xili Ciyaareedka Cusub:
Tottenham- U Soo Bixitaanka Champions league
Kooxda Tottenham oo xili ciyaareedkii la soo dhaafay kaalinta saddexaad ku dhamaysatay isla markaana si joogto ah ugu soo baxaysay UEFA Champions League sanadihii ugu danebeeyay ayaa noqotay kooxda kaliya ee premier league ka ciyaarta ee aan wax saxiix ah samayn xagaagan.
Laakiin Tottenham ayaa muujisay in ay ugu yaraan sii ilaashan karto xidigaha muhiimka ah ee kooxdeeda taas oo wali suurtogal ka dhigaysa in ay heerka ugu sareeya ka sii ciyaari karto. Kadib markii ay sanadihii ugu danbeeyay Spurs ka mid noqotay kooxaha sida tooska ah ugu tartamayay koobka Premier league, xili ciyaareedka cusub waxaa loo arkaa in Tottenham ay afarta sare iyo Champions League hiigsan doonto.
Shaxda Macquulka Ah Ee Uu Pachettino Ku Ciyaari Doono Xili Ciyaareedka Cusub:
Chelsea-U Soo Bixitaanka Champions league
Chelsea waxay xili ciyaareedkii la soo dhaafay ku dhamaysatay kaalinta shanaad waxayna markale ku jirtaa xaalad kala guur ah kadib markii shaqada kooxda laga caydhiyay Antonio Conte isla markaana loo magacaabay Maurizio Sarri. Waxayna Chelsea soo martay xaalad aad u adag oo hubanti la’aan ah laakiin ugu danbayn waxay u muuqtaa mid ka soo dhex baxday xaaladii aan la saadaalin karin ee ay soo martay.
Sarri ayaa ugu horayn diirada saari doona sidii uu Chelsea ugu soo celin lahaa Champions League isaga oo xili ciyaareedkiisa kowaad ka tartami doona Europa League, laakiin maadaama oo kulamada UEFA Europa League la ciyaaro khamiista waxay saamayn ku yeelan kartaa in ay si toos ah koobka Premier league ugu tartami karaan.
Muhiimada kowaad ee Chelsea ay hadda ku bilaabanaysaa waa in ay u soo baxdo Champions league laakiin taas micnaheedu ma aha in ay koobka u tartamayn, waxayna bartilmaameedka kowaad ka dhiganaysaa in ay afarta kaalmood ee sare ku soo laabto haddii ay koobka u tartanto oo ay ku guulaysan karto waa waxa ugu fiican ee ay doonayso.
Laakiin Sarri ayaa ku guulaystay in uu kooxdiisa ku sii hayo Eden Hazard, N’Golo Kante iyo Willian oo halis wayn ugu jiray in ay ka baxaan Stamford Bridge waana rajada ugu fiican ee ay Chelsea ku doonayso in ay koobka Premier league u tartanto isla markaana ay ugu soo laabto kaalmaha sare. Sarri ayaa sidoo kale helay badalka Courtois kaas oo uu ka dhigtay Kepa oo la filayo in door muhiim ah ciyaari doono.
Shaxda Macquulka Ah Ee Uu Sarri Ku Ciyaari Doono Xili Ciyaareedka Cusub:
Arsenal–U Soo Bixitaanka Champions league
Arsenal waxay bilaabanaysaa waayo cusub oo aan la saadaalin karin kadib markii uu Arsene Wenger kooxda ka baxay 22 sano kadib, waxayna shaqo wayni sugaysaa Unai Emery oo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Gunners bilaabanaya iyada oo waliba Arsenal xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah ay ka maqan tahay Champions League.
Muhiimada kowaad ee Arsenal ayaa ah in ay kaalmaha afarta sare ku soo laabtay isla markaana ay dadaal xoogan u gasho in ay shanta kooxood ee kale wax la qaybsan karto kadib markii ay labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ay ku dhamaysatay kaalmaha ka baxsan Top Four.
Haddii uu Unai Emery si fiican u fahmo kubbada cagta England waxa uu leeyahay khibrad fiican oo uu ka soo helay horyaalada Spain iyo France, laakiin waxa uu ku takhasusay tartanka Europa League ee ay kooxdiisa cusub ee Arsenal ka ciyaari doonto taas oo ah fursad kale oo ay Gunners ugu soo bixi karto Champions League isla markaana ay koob ugu guulaysan karto.
Laakiin saadaasha ilaa hadda la bixinayo waxay Arsenal dadaalka ugu wayn saari doontaa sidii ay ugu soo laaban lahayd afarta kaalmood ee sare iyada oo aan ka quusan doonin u tartamida koobka Premier league inta ay suurtogal tahay.
Shaxda Macquulka Ah Ee Uu Emery Ku Ciyaari Doono Xili Ciyaareedka Cusub:
Si kastaba ha ahaatee, waxaa hubaal ah in uu noqon doono xili ciyaareed kale oo xiiso badan iyada oo lixda kooxood ee waa wayni ay nafta u huri doonaan in ay horyaalka kaga dhamaystaan halka ugu fiican ee ugu suurtogalsan.